Mijoro amin'i Apple i Google miaraka amin'ny serivisy Google Photos | Avy amin'ny mac aho
Ankehitriny rehefa mandefa ny serivisiny sary miaraka amin'ny fitehirizana tsy voafetra i Google, inona no ho valintenin'i Apple?
Photography dia fomba fanao efa miha mahazo vahana eo amin'ny mpampiasa finday avo lenta rehetra ary miaraka amin'ny isan'ny fitaovana misy fakan-tsary mitambatra mitombo isan'andro serivisy rahona amin'ny fitehirizana sary saika ilaina tokoa raha tsy te-hanana ampihimamba ny toerana rehetra ao amin'ny terminal izahay.
Ity zava-misy ity dia fantatr'i Google tsara ary noho io antony io ihany tao amin'ny Google I / O tamin'ny andro lasa teo, nanolotra ny serivisiny Google Photos vaovao (maso ny data) fitehirizana tsy misy fetra maimaimpoana ny zavatra iray, zavatra iray izay tena nanaitra ny saiko satria raha ampitahao amin'ny iCloud, Ny vidinao dia 19,99 Euros isam-bolana amin'ny 1 Terabyte ny habaka isam-bolana.
Etsy ankilany, ny tontolo iainana omen'ny Apple amin'ny alàlan'ny iCloud amin'ireo fitaovany rehetra dia tena feno ary tsy isalasalana fa ny tsara indrindra amin'ny rehetra, tolotra hafa toa an'i Amazon manolora fifandanjana vidiny / kalitao tsara raha te handray an-tanana izany fa mihodinkodina eo amin'ny sehatry ny rindrambaiko indrindra raha mampiasa Mac isika.
Farany Google izay na dia tsy manana ilay Fampidirana Apple ao amin'ny fitaovanao, ankoatry ny serivisy an-tserasera tsy misy isalasalana, raha manana rindrambaiko izy izay tsy mitovy amin'ny Amazon, dia afaka mahita rindrambaiko hafa noforonin'ny Mountain View miaraka amin'ny ambaratonga avo lenta ambonin'ny salanisa amin'ny iOS aza izahay.
Ilay tokana izay Azonao atao ny manome tsiny an'i Apple amin'ny vidinyTsy mifaninana amin'ny tsena ankehitriny fotsiny izy ireo ary bebe kokoa noho izany raha jerena ny toerana natolotry ny mpifaninana mivantana indrindra aminy, na Amazon na Google.
Raha marina ny 5 Gb amin'ny habaka malalaka mazava fa tsy ampy ioManantena aho fa fantatr'i Apple ny fomba hamalian'izy ireo amin'ny fotoana mety an'ity fanafihana mazava ity ary farafaharatsiny mba hanome anay mpampiasa antony tsy tokony hifindra monina avy amin'ny serivisy fitehirizana sary an-tserasera
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ankehitriny rehefa mandefa ny serivisiny sary miaraka amin'ny fitehirizana tsy voafetra i Google, inona no ho valintenin'i Apple?
yon dia hoy izy:
Ny tsy resahina amin'ity karazana fampitahana ity dia ny fe-potoan'ny fifanarahana rehefa mampiasa ireo serivisy ireo. Toa ny zava-dehibe ihany dia ny manome lanja ny zavatra omeny antsika (fa tsy ny zavatra alainy amintsika, mitandrema tsara amin'izany).
Na dia Apple, Flickr na Dropbox aza, hajao ny atiny 100%, milaza fa hitantana ny atiny fotsiny izy ireo raha tsy ampiharina izany ary tsy mampiasa azy mihitsy ... Google dia manana fe-potoana tena hafa; azonao atao ny mampiasa ny atiny rehetra avy amin'ny Drive, Photos, Gmail na dia efa nakatona sy nofafanao ny data-nao aza !!! Anisan'izany ny fanaovana ampahibemaso, fizarana ireo atiny voalaza amin'ny antoko fahatelo, sns, sns.
Aza diso, tsy misy zavatra maimaim-poana, zavatra mahaliana azy ireo ihany no atolotry anao; Toy ny Facebook dia tsy misy fetrany raha ny momba ny famoahana sary sy sary hatramin'ny voalohany. Ahoana no hanananao azy ireo? Mifanohitra amin'ny tombontsoany izany. Arakaraka ny mampakatra ny atiny no tsara kokoa.
Flickr dia manohy ny manome be indrindra, manaja ny angon-drakitrao 100% ary maimaim-poana: 1Tb!
Mamaly an'i Yon
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, mazava ny google momba ny fiteny roa: "ianao no tompony ... fa izahay sy ny orinasa no mampiasa azy." Voalaza izany, inona ny fiantohana? Serivisy hafa izay, satria tsy nampakariko tao anatin'ny fotoana maromaro, nanidy ny kaontiko. Toa marina ny ahy (tsy nandoa na inona na inona aho), saingy tsy mahatonga ahy hamoy rakitra ireo, satria raha tsy izany dia kapila matevina sy paska masina.
aleo ampidinin'izy ireo ny vidiny. Tsy mampaninona ahy ny mandoa, indrindra ny fananana ny sariko voarindra sy amin'ny tontolo fantatro fa tsy hamidy miaraka amin'izy ireo, saingy hitako somary avo ny vidin'ny habaka ao amin'ny iCloud.
Yon garcia dia hoy izy:
Mazava ho azy. Ny vidin'ny Apple dia be loatra ary kokoa noho izany raha ny ankamaroan'ny mpampiasa paoma dia matetika ny mpampiasa no mitaky ny fahombiazany, na dia mila mandoa zavatra amin'izany aza isika (izay hitako fa mitombina). Tamin'ny tapa-bolana lasa izay dia nanala ny sary mivantana aho mba hanombohana an'i Flickr. Ho hitantsika izay aseho amin'ny herinandro ambony.
Valiny tamin'i Yon Garcia
Ny Genius Bars ao amin'ny Apple Store dia manohy manangona fahombiazana
IllLookLater dia mitazona ny efijery iPhone Jailbroken rehefa mahazo fampandrenesana